फुटबल टिमका कप्तानको प्रश्न- रंगशाला सुटिङका लागि खुला, तर फुटबलका लागि किन बन्द? :: Setopati
फुटबल टिमका कप्तानको प्रश्न- रंगशाला सुटिङका लागि खुला, तर फुटबलका लागि किन बन्द?
७ महिनादेखि ठप्प नेपाली खेलकुद गतिविधि खुलाउन सरकारले चासो नदेखाएमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
चोम्जोङले खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा खेलाडीलाई मार परेको बताउँदै तत्काल सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चेम्जोङले खेलकुद गतिविधि बन्दा हुँदा खेलाडीलाई जीवन धान्न गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारललाई खुलापत्र लेखेका छन्।
'खेलाडीले दुई खुट्टा चलाएर घर परिवार हेर्नु पर्नेछ। ७ महिनादेखि बेरोजगार भएका खेलाडीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? जुन खेलाडी खेलेर नै जीविका चलाउथ्यो, उ आज भोलि खेल मैदान छाडेर विदेश पो जाँदै छ त ! लाज हुने कुरा होइन यो खेलाडी, खेलकुद र राज्यका लागि मान्यज्यू?,' चेम्जोङले लेखेका छन्।
उनले दशरथ रंगशालामा फिल्म तथा म्युजिक भिडियोका लागि प्रवेश दिइएकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
'दु:खद् घडीमा बनाएको रंगशालामा फिल्मको सुटिङ, म्युजिक भिडियोका लागि प्रवेश खुला हुने। फुटबल लगि खेल्न चहिँ नहुने। फुटबलले देशका लागि त्यति ठूलो असर गर्छ र !,' उनको भनाइ छ।
पढ्नुहोस् चेम्जोङले खुलापत्र :-
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा सरकारज्यूलाई खुलापत्र लेख्न चाहन्छु।
म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको तर्फबाट, कप्तान किरण चेम्जोङ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र एन्फाको तर्फबाट सरकारलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने फुटबल मात्र नभइ सम्पूर्ण खेलकुद सुचारू गर्न सबै मापदण्ड पूरा गरी पूर्णरुपमा सुचारू गर्न हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
के खेलाडी सधैं मर्म मै पार्ने र मर्ने हो भने तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा बसेको के अर्थ रह्यो र ! खेलाडी चाहिँ सधैं काठमाडौंको धुलोमा तपाईँहरू चाहिँ चिल्लो गाडीमा !
खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्का मान्यज्यू र नेपाल सरकारज्यूले सायद बिर्सनु भयो होला देशको नाम खेलकुद र खेलाडीले चिनाउने गरेको छ।
तर यतिका महिना खेलाडी र खेलकुद कुन दुरदशामा छ भन्ने चासोको विषय नबनेको देख्दा फुटलबमा भविष्य खोज्ने भाइबहिनीहरुमा कतिको असर गरेको छ भन्ने कुरा खुलस्तरुपमा देखिन सकिन्छ।
सम्पूर्ण देशमा फुटबल सुरु भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा खेलकुदको विषयमा बोलिदिने मान्छे भएन। खेलाडीको लागि मात्र होइन खेलकुदका लागि बोलिदिने मान्छे भएन।
सबै देशमा फुटबल सुरु भइसक्दा हाम्रो देदशमा खेल मैदानका लागि दु:खद् घडीमा बनाएको रंगशालामा फिल्मको सुटिङ, म्युजिक भिडियोका लागि प्रवेश खुला हुने। फुटबल लगि खेल्न चहिँ नहुने। फुटबलले देशका लागि त्यति ठूलो असर गर्छ र !
अबका दिनमा सम्पूर्ण खेल मैदानमा खेल सुचारु गदिदिन अनुरोध गर्दछु। आखिर कहिलेसम्म नेपाली फुटबलको लोकदोहोरी फेसबुकमा हेरेर बस्ने हामीले। नेपाली फुटबलको विकासका लागि कसैले केहि गरिरहेको देखिन।
फुटबल खेलाडीले खेल्न बिर्सिसके। फुटबल राजनीति जस्तो होइन सरकार । फुटबलमा हात खुट्टाले दिमाख लगाउर खेलिन्छ। चिल्लो गाडीमा बसेर गफ लगाए जस्तो हुन्न।
खेलाडीले दुई खुट्टा चलाएर घर परिवार हेर्नु पर्नेछ। ७ महिनादेखि बेरोजगार भएका खेलाडीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? जुन खेलाडी खेलेर नै जिविका चलाउथ्यो, उ आज भोलि खेलमैदान छाडेर विदेश पो जाँदै छ त ! लाज हुने कुरा होइन यो खेलाडी, खेलकुद र राज्यकालागि मान्यज्यू?